‘अम्लान फूल’मा पोखिइन् शान्ति – Chetananews.com
‘अम्लान फूल’मा पोखिइन् शान्ति
१३ फाल्गुन २०७४, आईतवार ०८:२४ 336 पटक हेरिएको
मलाई नखुल्ने, बिहानी नदेऊ
नफुल्ने रुखो, जिन्दगानी नदेऊ
सधैँ मुस्कुराइरहेछ यो फूल
रुँदै बस्नुपर्ने, जवानी नदेऊ
यहाँ मौनताले, डसिरन्छ छाती
तिमी यादका, राजधानी नदेऊ
कि आऊन् उनी, स्वप्न मात्रै नआऊ
सधैँ ‘शान्ति’ भाँड्ने, सिरानी नदेऊ
भर्खरै विमोचित आफ्नै गजल संग्रह ‘अम्लान फूल’बाट गजलकार शान्ति शर्माले प्रस्तुत सेयरमा लय भरिन् । शब्दको भाव र उनले भोगेको परिस्थितिगम्यताले वातावरण मौन बन्यो । गजलकार शर्माले जीवनमा गहिरो स्वास्थ्य समस्या पार गरेकीले पनि उनका शब्दले त्यो भाव बोकेको प्रतीत हुन्थ्यो ।
शनिबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्रमुख अतिथि अग्रज गजलकार ज्ञानुवाकर पौडेललगायत अतिथिले अम्लान फूल गजल संग्रह संयुक्त रूपमा विमोचन गरेका हुन् । त्यही कृतिमा समेटिएको गजलका सेयरहरू शान्तिले लयबद्ध रूपमा प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
छोरीको गजल संग्रह विमोचन समारोहमा सभाध्यक्ष बनेकी गजलकार शर्माकी आमा इन्द्रकुमारी शर्मा छोरीले गजल गाउँदा स्तब्ध बनिन् । पहिलो कृतिका रूपमा आएको शर्माको गजल संग्रह ‘रुखो जमानामा फक्रिएको कोमल फूल’ भएको टिप्पणी प्रमुख अतिथि पौडेलले गरे । उनले शान्तिको नामजस्तै उनको स्वभाव, शैली, पहिरन, गायकी र लेखनसमेत शान्त, शालिन र हृदयको गहिराइ छुन सक्ने भएको बताए । गजल कृति नेपाली साहित्य फाँटमा सधैँ जीवन्त रहने अपेक्षा पौडेलले राखे ।
चितवनबाट आएका गलकार धनराज गिरीले अम्लान भनेको कहिल्यै नओइलाउने फूल भएको प्रस्ट्याए । उनले शर्माको कृतिको न्वारन राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेले गरेको रहस्य बताए । ‘साँच्चै कृतिमा मनको वह मात्र होइन, प्रकृति प्रेम, मानवता, सरलता, भाव र समयको सम्बोधन अटाएको बताए ।
कार्यक्रममा शुभकामना राख्दै पोखराबाट आएका गजलकार प्रकट पंगेनी ‘शिव’ले गजल क्षेत्रको अब्बल कृति नेपाली साहित्यले पाएको धारणा राखे । आवरण निर्माता साहित्यकार तथा सञ्चारकर्मी रमेश पौडेलले शान्तिका गजल हृदयको अन्तस्करणबाट प्रस्फुटन भएको धारणा राखे । रुखो, एकलकाँटे र भावविहीन हुँदै गएको वर्तमान समाजमा अम्लान फूल भावनाको सुन्दर बगैँचा भएको टिप्पणी सनतकुमार वस्तीको थियो ।
साहित्कार डा. घनश्याम परिश्रमी, सनत रेग्मी, डा. विजय सुब्बा, माया ठकुरीलगायतले आफ्ना धारणा र रचना प्रस्तुत गरेका थिए । ६० वटा गजल समेटिएको ८० पृष्ठको कृति मित्रलाल शर्मा स्मृति पुस्तकालय सोलुखुम्बुले प्रकाशन गरेको हो । विमोचन कार्यक्रमको आयोजना दियालो साहित्य सरगम र घोस्ट राइटिङ नेपालले गरेका थिए ।
पूर्व आइजिपीको आत्मकथा ‘अच्युतकृष्ण